Filtrer les éléments par date : samedi, 06 mars 2021
samedi, 06 mars 2021 20:28
Vita ve ny fifampitahana sary ?
Pilo kely : Vita ve ny fifampitahana sary ?
Rehefa vita ny fifampitahana sary, afaka miroso amin'ny tena fampandrosoana amin'izay ve, sa mbola anao tatitra indray koa ny ankilany hanome valin-kafatra?
Lazao izahay rehefa tapitra ny toraka kapoaka anisana iza no nampihitsana kapoaka be indrindra. Nivadika kermesy manko ty raha ty.
samedi, 06 mars 2021 15:00
Sary contre sary izany sisa izy ity
Hotanterahina anio 06 Marsa 2021 ao amin’ny Palais des Sports Mahamasina ny Antsam-piderana ho an'ny firenena.
Tapakila maimaimpoana nalaina mialoha tao amin’ny tranom-bokim-pirenena sy tao amin’ny Supermusic Analakely ary teny amin’ny Viva Arena Alarobia Ivandry no ahafahana miditra ao an-toerana.
Araka ny toromarika dia fotsy ranoray ny loko hisalorana sy ho hita amin’izay olona ho avy ao.
Nisokatra tamin’ny 12 ora ny vavahady ary amin’ny 3 ora tolakandro no hanomboka ny Antsam-piderana.
samedi, 06 mars 2021 12:12
Politika : Tsy manana mpandinika raharaham-pirenena ny mpitondra ?
Raha mahita ity fomba hitantanan'ny fitondrana ankehitriny ny vali-bontana sy fandrirarina ny mpanohitra eto Antananarivo ity, dia mampanontany tena raha manana mpandinika raharaham-pirenena matotra ny fitondrana ankehitriny.
Hifaninanany amin'ingahy Marc Ravalomanana indray ny famoriam-bahoaka eto Antananarivo, efa tapitra anie ny fampielezan-kevitra e, ary ny filazana fa tsy mahavory vahoaka eto Antananarivo ny mpanohitra, na hoe sandaina vola ireo olona manaradia ny mpanohitra dia fahadisoan-kevitra goavana izany.
Ny vokam-pifidianana teto amin'ny faritanin'Antananarivo dia milaza mazava fa tsy nahazo ny antsasaky ny vato azon'ingahy Marc Ravalomanana ny kandida Andry Rajoelina. Teto Antananarivo 1 077 520 na 64.31% no vato azon'i Marc Ravalomanana, raha 597 924 na 35.69% no azon'i Andry Rajoelina.
Ary rehefa lany filoham-pirenena, sy nandalo ireo krizy Covid-19 sy krizy sosialy maro, dia azo antoka fa nihena ihany koa izay taham-pankasitrahana eto Antananarivo izay.
samedi, 06 mars 2021 11:25
Covid-19 : Miakatra ny tahan’ireo mitondra ny valanaretina eto Madagasikara
Tsikaritra tato ho ato fa misy fiakarany ny tahan’ireo mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, araka ny tati-baovao nataon’ny avy eo anivon’ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka.
Paik’ady apetraka manoloana izany ny fizarana CVO, ka any amin’ireo faritra ahitana fiakaran’ny taha no hanombohana izany, anisany ny eto Analamanga.
samedi, 06 mars 2021 10:41
Magro Tanjombato : Hanao tatitra ireo solombavam-bahoaka TIM
Nanome alalana ny hampiasana ny toerana ny Groupe Tiko, nanome alalana hanatanterahan’ireo solombavam-bahoaka TIM hanao tatitra amin’ny vahoaka ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny prefen’Antananarivo.
Anio sabotsy 6 marsa 2021 no hotanterahina eo amin’ny Magro Tanjombato ireo solombavam-bahoaka TIM Miara-Manonja.
Mitohy ny fidiran'ny olona ao anaty toerana mifefy, hihaino tatitra. Manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny fidirana ao amin’ny Magro Tanjombato, Distrika Antananarivo Atsimondrano, Faritra Analamanga.
samedi, 06 mars 2021 09:16
Hivoaka an-dranomasina afaka fotoana fohy ao Mahanoro ny sisan'ilay androa ratsy
Toetr’andro : Hivoaka an-dranomasina afaka fotoana fohy ao Mahanoro ny sisan'ilay androa ratsy.
Mbola mitoetra any amin'ny faritra Avatra sy Avaratra-andrefanan'ny Nosy ny Talio.
(Sary Satelita 06 marsa 2021 - 10h30)
samedi, 06 mars 2021 09:06
RN1-bis Tsiroanimandidy - Maintirano
Sary : César Mamizafy
samedi, 06 mars 2021 09:01
Antananarivo Renivohitra : Polisy monisipaly ary mpamonjy voina 150 naseho ambany faneva
Tontosa ny zoma 05 marsa ny fandraisana eo ambany fanevam-pirenena ireo Polisy monisipaly 100, ary mpamonjy voina 50, taorian’ny fiofanana narahin’izy ireo herinandro maromaro.
Hiasa ho an’ny mponina sy ny tanànan’Antananarivo izy ireo hanatevin-daharana sy hifanampy amin’ny fandaminana ary ny fampandrosoana ny tanàna.
Niara-nientana sy nifanome tanana tamin’ny fanomezana fanofanana ara-miaramila azy ireo ny Etat Major ny Tafika Malagasy, ny Tafika an-tanety, ny 3ème Régiment du Génie.
samedi, 06 mars 2021 08:20